Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » CDC: Tallaal kasta oo ay ansixiso WHO ayaa ku habboon gelitaanka Mareykanka
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Tallaalada ay soo saareen Pfizer-BioNTech, Moderna iyo Johnson & Johnson ayaa hadda lagu ansixiyay Mareykanka-labada dambe waxay ku saleysan yihiin adeegsi deg-deg ah oo keliya-halka WHO ay taageertay jabsyada AstraZeneca/Oxford, Sinopharm iyo Sinovac marka lagu daro saddexda horay loo magacaabay .
Lix tallaal oo ay FDA oggolaatay/oggolaatay ama ku liis garaysay isticmaalka deg -degga ah ee WHO ayaa buuxin doona shuruudaha socdaalka Mareykanka.
Faallooyinka CDC ayaa imanaya toddobaadyo ka dib markii Aqalka Cad uu sheegay inuu ka qaadi doono xayiraadaha safarka hawada 33 dal.
CDC-da ayaa sidoo kale xaqiijisay inay ku wargelisay shirkadaha duulimaadyada kala duwan liiska la oggolaaday ee jabs-ka COVID-19.
Af-hayeenka Xakamaynta iyo Ka-hortagga Cudurrada Mareykanka (CDC) ayaa sheegay in tallaal kasta oo COVID-19 ah oo ay oggolaatay Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) loo oggolaan doono booqdayaasha ajnabiga ah ee u safraya Mareykanka.
"Lix tallaal oo FDA oggolaatay/oggolaatay ama liis garaysay isticmaalka deg -degga ah ee WHO ayaa buuxin doona shuruudaha safarka Mareykanka," a CDC ayuu yiri afhayeenka, sida laga soo xigtay ilaha wararka.
Tallaalada waxaa sameeyay Pfizer-BioNTech, Casri ah iyo Johnson & Johnson ayaa hadda lagu ansixiyay Mareykanka-labada dambe ee ku saleysan adeegsiga degdegga ah oo keliya-halka WHO ay taageertay jabsyada AstraZeneca/Oxford, Sinopharm iyo Sinovac marka lagu daro saddexda horay loo magacaabay.
Faallooyinka CDC ayaa imanaya toddobaadyo ka dib markii Aqalka Cad uu sheegay inuu ka qaadi doono xayiraadaha safarka hawada 33 waddan, oo markii hore lagu soo rogay si loo joojiyo faafitaanka COVID-19, mararka qaarkood bisha Nofembar. Hase yeeshee, waqtigaas, ma aysan caddeyn tallaallada u qalma.
Gelinkii dambe ee Jimcihii, CDC -da ayaa sidoo kale xaqiijisay inay ku wargelisay shirkadaha duulimaadyada kala duwan ee liiska la oggolaaday ee jabs, iyagoo intaas ku daray in hay'adda caafimaadku "sii deyn doonto hagitaan iyo macluumaad dheeri ah maadaama shuruudaha socdaalka la soo gabagabeeyay."
Hay'ad matalaysa tiro ka mid ah kuwa xambaara diyaaradaha, Airlines for America, ayaa xaqiijisay sheegashadaas, iyagoo leh "waxay ku faraxsan tahay go'aanka CDC ee lagu ansixiyay liiska tallaallada la oggolaaday ee socdaalayaasha soo galaya Mareykanka."
Joey wuxuu leeyahay,
Oktoobar 9, 2021 at 19: 26
Kaliya Comirnaty ayaa FDA oggolaatay. Pfizer-BioNTech waa EUA sida Moderna iyo J&J. Waxaa si cad loogu qeexay dukumiintiyada FDA (Warqadda Ansixinta, Su'aalaha la isweydiiyo ee Comirnaty (COVID-19 Vaccine mRNA) iyo Warqadda Oggolaanshaha (Dib-u-daabacday).